Akụkọ banyere Galicia: Akụkọ ifo nke ala mara mma | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | Spain obodo, omenala, España
Akụkọ banyere Galicia na-emeghachi omume n'amaghị ama nke ókèala nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite. Ọnọdụ ihu igwe ya na mmiri ozuzo, ala mmiri ya na ndagwurugwu ya ndị miri emi na-enyekwa onwe ha n'ụzọ dị ịtụnanya na ọdịdị nke akụkọ ifo na akụkọ gbara ọchịchịrị.
Ya mere, ọ bụghị na ndapụta na Galicia bụ ebe jupụtara na akụkọ ifo. Fọdụ nwere mgbọrọgwụ n'ime oge nke oge, ma, na-atụgharị anya, metụtara akụkọ ndị yiri ha amụrụ na etiti na mgbago ugwu Europe. Ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, bụ ezigbo ụmụ amaala ma na-emeghachi omume dị ọcha akụkọ mgbe ochie. Ọ bụrụ na ụwa ụwa na-atọ gị ụtọ, anyị na-akpọ gị ka ị gaa n’ihu n’ịgụ ihe, ebe anyị na-aga ịgwa gị ụfọdụ akụkọ ifo pụrụ iche na ama ama nke Galicia.
1 Akụkọ banyere Galicia: Otu ihe nketa na-enweghị atụ
1.1 Companylọ Ọrụ Dị Nsọ
1.2 Costa da Morte, olulu akụkọ ifo
1.3 Lọ elu Hercules
1.4 Okpu-oku nke oku, akuko ojoo ojoo
1.5 Santaka Santa María de Castrelos na akụkọ ifo nke onye na-akpụ ụrọ
1.7 Ọgba nke King Cintolo
Akụkọ banyere Galicia: Otu ihe nketa na-enweghị atụ
Ọtụtụ akụkọ akụkọ banyere Galicia nke dịruola taa bụ ndị na-anwale ule oge maka ihe pụrụ iche ọdịnala ederede nke ala ahu. N'ihi na ọtụtụ ndị sitere n'ọdịbendị ndị a ma ama sitere n'ọgbọ ruo n'ọgbọ site na akụkọ ndị a na-akọ n'abalị oyi n'okpuru ọkụ. Mana, n’ebughikwu okwu, anyị ga-agwa gị gbasara ụfọdụ akụkọ ifo ndị a.
Companylọ Ọrụ Dị Nsọ
Ikekwe nke a bụ, n'otu oge ahụ, akụkọ kacha ewu ewu banyere Galicia na nke a na-emeghachi ugboro ugboro na kọntinenti ise. N'ozuzu ya, ọ na-ekwu na ndị nwụrụ anwụ na-aga n'ala ndị Galician n'abalị iji dọọ ịdọ aka ná ntị banyere ọnwụ n'ọdịnihu. N'ihu ụdị usoro a na-emenye ụjọ na-aga ụdịdị dị iche iche akpọrọ Ighaghari ma onye ọ bụla hụrụ ya ga-esoro ya n’ihe ndọba oriọna na ite.
Dika anyi gwara gi na mbu, akuko a nwere otutu uzo ozo na Europe. Dịka ọmụmaatụ, ọ jikọtara ya Hchụ nta anụ ọhịa o Mesnie hellequin nke ala ndị German. Ma anyị ekwesịghị ịga ebe ahụ. A na-ahụ akụkọ ndị yiri nke a n'akụkọ ọdịbendị na-emepe emepe ọzọ. Dị ka ihe atụ, anyị nwere ike banyere Güestia na Asturias, ndị Egwu in Castile na ndị Corteju na Extremadura na akụkọ ndị ọzọ na ebe dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, dị ka akụkọ egwu ọ bụla kwesịrị ịdị nnu, nke a nwekwara ụzọ ya iji gbochie mmetụta nke ịhụ Santa Compaña. N'etiti ha, mepụta obe n'ụzọ ụfọdụ, see gburugburu n'ala wee banye n'ime ka ị na-agafe ma ọ bụ banye na nrịgo nke ụgbọ mmiri.
Costa da Morte, olulu akụkọ ifo
Ndị Costa da Morte
Dị ka ị maara, na ugwu ugwu nke Galicia bụ Costa na Morte o Costa de la Muerte, ókèala nke aha ya nyeburu onwe ya ịdị adị nke akụkọ mgbe ochie. Nke mbụ n’ime ha malitere n’oge Rom, ebe ọ bụ na ha weere na ọ kara akara nke ala ubi, ya bụ, nsọtụ ụwa.
N'ebe ahụ ka oké osimiri malitere ma, dị ka nkwenkwe ndị Rom si dị, mmiri riri ndị banyere na ya, ma ọ bụ mmiri n'onwe ya, ma ọ bụ ihe ndị e kere eke dị egwu. Tupu ha, ndị Celt na-efe chi anyanwụ n'ala ndị ahụ.
Ma nke bụ eziokwu bụ na anụ ọhịa nke ụsọ mmiri ndị ahụ na ike nke oké iwe Atlantic na-akpata ọtụtụ ụgbọ mmiri kpuru. Ndị a bụ ebe izu ike ọzọ zuru oke maka akụkọ ifo. N’etiti ha, ndị bụ obodo ochie nke mgbe ochie ndị mmiri gbara ili, nke okwute ebube ma ọ bụ nke ndị nsọ na-agwọ meigallo (anya ojoo).
Lọ elu Hercules
Ọ bụ naanị ụlọ ọkụ nke sitere n'oge Rom nke na-adịgide. Yabụ, ọ nwere puku afọ abụọ nke akụkọ ntolite. Dịka ị ga-aghọta, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ọtụtụ akụkọ ifo na akụkọ ifo amalitela gburugburu ụlọ elu ahụ.
Ndị kasị ewu ewu bụ na ndị bi na Brigantium ma ọ bụ Breogan ha biri n'oké egwu nke dike ahu Geryon, onye choro ụdị ụtụ niile, gụnyere ụmụ ha. N’ịbụ ndị chere na ọ gaghị ekwe omume imeri ya, ha rịọrọ maka enyemaka Hercules, bụ onye mara ya aka duel wee merie ya mgbe ọgbụgba ọbara gasịrị.
Mgbe ahụ, dike ahụ liri Geryon ma, n'elu ili ya, wulite ụlọ elu nke o ji oriọna kpuchie ya. Dị nnọọ nso, na mgbakwunye, o kere obodo, dịka nwanyị mbụ bịarutere wee kpọọ ya Cruña, Hercules kpọrọ aha obodo ọhụrụ ahụ La Coruña.
Akụkọ ọzọ banyere ụlọ elu Hercules na-ekwu na ebe ebe Towerlọ elu Breogán. Nke a gaara eze Galician a ma ama na-egosi na akụkọ ifo, kpọmkwem na Lebor Gábála Érenn o Akwụkwọ Mmeri nke Irish.
Dabere na akụkọ mgbe ochie, Breogán gaara ewulite ụlọ elu a ma, site n'elu ya, ụmụ ya ga-ahụ ala ahịhịa ndụ. N’ịchọ izute ya, ha banyere ma bịarute Ireland. N'ezie, na ụkwụ nke Towerlọ Elu Hercules ị nwere ike ịhụ taa ihe oyiyi edoro nye eze a ma ama, otu n'ime nnukwu ọnụ ọgụgụ akụkọ ifo ndị Galician.
Okpu-oku nke oku, akuko ojoo ojoo
Lelọ nke Monforte de Lemos
Monforte de Lemos ọ bụ otu n'ime obodo ndị kachasị ewu ewu na Galicia. Otu n'ime akụkọ mgbe ochie ya kwuru kpọmkwem n'etiti ụlọ nke obodo na Benedictine obibi ndị mọnk nke San Vicente del Pino e nwere ụzọ nzuzo nzuzo.
Otu n'ime oge Ọnụ Lemos Ọ nọghị na nnukwu ụlọ ahụ iji mezuo ụfọdụ ọrụ sitere n'aka eze, abbot nke ebe obibi ndị mọnk ahụ jiri ụzọ ahụ gaa leta nwa nwanyị aristocrat, onye ya na ya malitere mmekọrịta.
Mgbe ọ lọtara, nwoke ahụ si Lemos chọpụtara ma kpọọ ụkọchukwu ka o rie nri. Ma n’oge eji megharịa ọnụ, ọ ga-enye ya okpueze igwe na-acha ọbara ọbara, tinye ya n’isi, wee daa. Taa, na-esote akụkụ baptism nke ụka ndị mọnk, ị nwere ike ịhụ ili nke Abbot ahụ na-adịghị mma, onye aha ya bụ Diego Garcia.
Santaka Santa María de Castrelos na akụkọ ifo nke onye na-akpụ ụrọ
Chọọchị Santa María de Castrelos
Akụkọ mgbe ochie nwere ya na obodo Vigo Castrelos ọ dịrị ndụ onye-oji, na m bụ ara ara n'anya nwata nwanyi. Ọ meela agadi ma ọ bụ oge mbụ ihe mere ya. O kpebiri mgbe ahụ inye ya nnukwu ọla, mana nwa agbọghọ ahụ jụrụ ya.
Ebe ikpe ya funahụrụ ya, ọ họọrọ ịtọrọ ya wee kpọchie ya na smithy ya. Otú ọ dị, nwa agbọghọ ahụ rịọrọ ya ka ọ hapụ ya ka ọ gaa uka kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na ụka dị n'ihu ụlọ ọrụ ya, nwoke ahụ nakweere.
Kaosinadị, a meiga ọ gara ileta ọkpụ ahụ iji gwa ya na ọ ga-anwụ n'oge na-adịghị anya nakwa na onye ọ hụrụ n'anya ga-alụ nwoke ọzọ dị obere karịa onwe ya. N'ịbụ onye iwe kpuchiri, ọ nara ígwè dị ọkụ wee gaa chọọchị iji mebie ihu nwa agbọghọ ahụ. Otú ọ dị, Dios o nwere atụmatụ ndị ọzọ. Ngwa ngwa, ọ kpọchiri ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ahụ iji chebe ya. Ka nwere ike ihu facade ndịda nke ụka taa yana ya ọnụ ụzọ mechie.
Chọọchị San Andrés de Teixido
Nke a obere parish na Coruña obodo nke Cedeira O nwere hermitage nke bụ ihe nke njem uka. N'etiti ụmụ amaala mpaghara ahụ okwu a na-ewu ewu «Na San Andrés de Teixido ọ na-aga de morto ma ọ bụ na non foi de vivo» ma na-aza akụkọ dị egwu.
Ọ na-ekwu na Saint Andrew Enwere m anyaụfụ Santiago, nke bụrịrị ihe njem ofufe. O mere mkpesa ya Dios, onye ihe wutere ya wutere. Ya mere o kwere ya nkwa na mmadụ niile ga-aga n'ahịrị gaa ebe nsọ ya na onye ọ bụla na-adịghị ndụ ga-eme ya mgbe ọ nwụsịrị, lọghachikwara n'ime anụmanụ.
Otu ọdịiche dị na akụkọ a na-ekwu na ụgbọ mmiri San Andrés kpuru n'ụgbọ mmiri a n'ụsọ mmiri ndị a nakwa na ụgbọ mmiri ahụ ghọrọ nkume nke taa mebere obere agwaetiti na oke osimiri dị egwu nke Cedeira. Nnukwu ihe dị egwu nke ụgbọ mmiri ahụ nke mere na Chineke kwere ndị sent ahụ nkwa na mmadụ niile ga-eleta ya n'ime hermitage.
Ọgba nke King Cintolo
Anyị ga-emecha njem anyị site na akụkọ mgbe ochie nke Galicia na nke a gụnyere ndị eze nwere obi ọma, ụmụ adaeze na-eto eto, ndị dibịa afa ọjọọ na-eme ihe egwu dị egwu na ụmụ nwoke n'ịhụnanya.
King Cintolo Cave bụ nke kachasị ukwuu na Galicia, nwere ihe karịrị mita 6 n’ogologo. Ọ nọ n'uju Mariña Lucense, kpomkwem na parish nke Esemokwu. Ọfọn, dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, n'oge ochie, ógbè ahụ bara ọgaranya alaeze nke Bría onye eze ya bu Eriri.
N’oge ahụ, ọ nwere nwa nwanyị mara mma aha ya Xila emi ekenen̄erede ama akparawa oro Uxío, onye kwekọrọ na ya. Ọ bụ ezie na ọ magburu onwe ya, agbamakwụkwọ ahụ dị n'etiti ha abụọ ekwenyeworị mgbe onye mgbaasị dị ike Manilan Ọ tụrụ eze egwu na ọ ga-emepụta ọgwụ ga-eme ka alaeze ya kwụsị ma ọ bụrụ na ọ kpọghị Xila ka ọ bụrụ nwunye ya.
Ma Uxío ekweghị ka o kwe ma gbuo onye mgbaasị ahụ. Agbanyeghị, ọ kwadebela ọgwụ ya ma, mgbe onye nwere obi ike hụrụ n'anya laghachi na Bría, ọ nwụọlarị. N’ebe ahụ ọ nọrọ, ọ bụ naanị n’ọnụ ọgba ka ọ hụrụ. N'ịchọsi ike, ọ banyere n'ime ya ka ọ chọọ onye ọ hụrụ n'anya, ọ pụtaghị ọzọ.
Na mmechi, anyị gwara gị ụfọdụ n'ime akụkọ mgbe ochie nke Galicia Ndị ọzọ ewu ewu. Mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ anyị ga-ahapụ, ikekwe, maka isiokwu ọzọ. N'etiti ha, nke Pontevedra ntọala, nke ugwu paralaia, nke ọrụ ebube nke Bouzas ma ọ bụ nke Ugwu Pindo. Ihe niile gbara Galicia gburugburu bụ anwansị ma na-atọ ụtọ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike, echefula ohere iji gbanahụ ụfọdụ ebe anyị kpọtụrụ aha ma nwee ọmarịcha mma nke ime njem ime obodo na mpaghara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Akụkọ banyere Galicia